मेरो काम हेरेनन् उल्टै तरुनीको बात लगाए :: पण्डित दीनबन्धु पोखरेल (आध्यात्मिक जागरण अभियन्ता) – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१० कार्तिक २०७७, सोमबार ०१:१६ English
मेरो काम हेरेनन् उल्टै तरुनीको बात लगाए :: पण्डित दीनबन्धु पोखरेल (आध्यात्मिक जागरण अभियन्ता)
० तपाईं किशोर उमेरदेखि नै धार्मिक तथा आध्यात्मिक प्रवचनमार्फत समाजसेवामा लागिपर्नुभएको छ, किन यो क्षेत्र रोज्नुभयो ?
– यसमा २–३ वटा कारण छन् । पहिलो कुरा त मेरा पिताजी स्वर्गीय नारायणप्रसाद पोखरेलले धार्मिक अभियानमार्फत समाजको विकास गर्ने नितान्त नौलो अभियान थाल्नुभएको र त्यस अभियानमा आफूलाई समाहित गर्ने मेरो पनि उत्कट अभिलाषा रहेकोले म यसतर्फ तानिएको हुँ । पिताजीको असामयिक अवसानपछि त यो विषयलाई उठान गर्ने र थप गति दिएर पिताजीको सपनालाई नवीनतम् ढङ्गले साकार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । अर्को कुरा मलाई सानैदेखि मिडियामा आउने रहर पनि थियो । त्यसका लागि पिताजीको अभियानलाई मैले एक उत्तम माध्यमका रूपमा पाएँ । उहाँको अवसानपछि धेरै भक्तजन तथा शुभचिन्तकले ‘पण्डित नारायण पोखरेलकै घरबाट कसैले यो अभियानलाई निरन्तरता दिए हुन्थ्यो’ भन्ने चाहना राखेको पाइयो र उहाँहरूको सो चाहनाको सम्मान पनि हुने र समाज रूपान्तरणको प्रक्रियामा होमिन पनि पाइने ठानेर आध्यात्मिक प्रवचन दिन थालेको हुँ मैले ।
० अहिलेसम्म कतिवटा जति महायज्ञ गराउनुभयो तपाईंले ?
– लगभग दुई सय २५ पुगे होलान् ।
० अनि त्यसबाट कतिजति रकम उठ्यो होला, केही हिसाब छ ?
– नेपालमा मात्रै २० अर्बभन्दा बढी उठिसक्यो भन्ने लाग्छ ।
० यत्तिका रकम उठेछ, त्यसबाट समाजका लागि के–कति र कस्ता काम भए होलान् नि ?
– एक सय ८० भन्दा बढी विद्यालय बनेका छन् । झन्डै ३०–४० वटा अस्पताल बने । पुलपुलेसाको काम पनि भएको छ । वृद्धाश्रम र धामहरू निर्माण भएका छन् । बहुउद्देश्यीय सामुदायिक भवन निर्माण भएका छन् । यस्तै–यस्तै भौतिक समृद्धिको प्रयोजनमा रकम प्रयोग भएको देखे–बुझेको छ ।
० अब यस्तै महायज्ञ र प्रवचनमा नै आनन्द लाग्न थाल्यो होइन तपाईंलाई ?
– भौतिक समृद्धि मात्रै भन्दा पनि आमसञ्चार र समाजले यस अभियानलाई नवीनतम् ढङ्गबाट हेर्नुपर्छ । दीनबन्धु पोखरेल जाने, पुराण वाचन गर्ने र पैसा उठाइदिने मात्रै भन्दा पनि यो अभियानलाई व्यापक आयामबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । म मानव धर्मको कुरा गर्छु, मानव जातको कुरा गर्छु, समाजमा देखिएका दलीय, वर्गीय, साम्प्रदायिक, भाषिक, जातीय विभेदीकरण र विद्वेषको समूल अन्त्यका लागि म काम गरिरहेछु । म जहाँ पुग्छु त्यहाँ ‘मानव मिलन समाज’ आयोजना भइरहेको अर्थमा मैले लिने गरेको छु । मानव–मानवबीच विद्वेष र फुट होइन सहकार्य, भाइचारा र एकता हुनुपर्छ भनेर मैले आफ्ना प्रवचन कार्यक्रमहरूलाई त्यसअनुरूप सार्थक बनाउन खोजेको हुन्छु । छुवाछुत र बलिप्रथाजस्ता विकृति–विसङ्गतिहरूको अन्त्य गर्दै हाम्रो धर्म वैज्ञानिक छ भन्ने झल्काउनु पनि मेरो उद्देश्य हो ।
० युवा वर्गलाई पनि समेट्छ कि तपाईंको अभियानले ?
– अवश्य । युवालाई पनि आध्यात्मिक धारमा समाहित गरेको छु मैले । युवामा आएको आध्यात्मिक जागरणले त्यो युवा शान्तिकामी व्यक्तिका रूपमा अगाडि बढ्छ । उसमा आएको शान्तिकामी चिन्तनले परिवार र समाजमा शान्ति छाउँछ, फलतः राष्ट्र नै शान्तिको मार्गमा उन्मुख हुन्छ । हाम्रो अभियानले युवाहरूलाई व्यावहारिक रूपले नै शान्तिकामी मूलधारमा समाहित गरेर राष्ट्रमा दिगो शान्ति स्थापना गर्न सघाउनेमा म विश्वस्त छु । नेपाली मोडालिटीको आध्यात्मिकता विकास गर्नकै लागि म नेपाली टोपी शिरमा कहिल्यै छुटाउँदिनँ । राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्न पनि यो अभियानले ठूलो काम गरेको छ । समाजमा रहेका सम्भ्रान्त वर्गको पहुँचमा रहेको निष्क्रिय रहेको पुँजीलाई समाजमा दान गराएर गरिब–निमुखाका छोराछोरीले पढ्न पाउने, अस्पतालको मुख देख्न पाउने काममा खर्च गराएका छौँ हामीले । आर्थिक समानताको समान वितरणका पक्ष पनि यसर्थ यसमा समेटिएका छन् । त्यसैले यो अभियान धार्मिक, सांस्कृतिक, अर्थिक र सामाजिक अभियान पनि हो । विकृतिको अन्त्य गर्दै सांस्कृतिक मूल्य–मान्यताको जगेर्ना गर्न यसबाट ठूलो टेवा पुगेको छ । झट्ट हेर्दा दीनबन्धुले गएर नचाउने मात्र ठान्दा हुन् मानिसले तर यो अभियानमा अन्तर्निहित दायरा धेरै फराकिलो छ ।
० अरू पण्डितहरूको तुलनामा तपाईंको प्रवचनमा मानिस विशेष रूपले आकर्षित भएकोचाहिँ किन होला जस्तो लाग्छ ?
– मानिसलाई प्रवचनमार्फत सम्मोहन गर्न सक्ने मभित्र त्यस्तो कुनै विशेष शक्ति छ भनेर दाबी या आत्मप्रशंसा गर्न म सक्दिनँ, यसो गर्न सुहाउने कुरा पनि भएन । तर, यसो हुनुको कारण के होजस्तो मलाई लाग्छ भने वाचकको शैली, उसको प्रस्तुति, उसका वैयक्तिक वाक् चातुर्यता या वाकुपटुता सँगसँगै ज्ञान र धर्मलाई विज्ञानसँग समायोजन गरेर दिइने प्रस्तुतिका कारण मप्रति श्रोताहरूको विशेष आकर्षण भएको होला । मेरा यज्ञ–प्रवचनमा आजभोलि साठी–सत्तरी प्रतिशत त युवा श्रोता उपस्थित भएर सुनिरहेका हुन्छन् । पहिले–पहिलेजस्तो वृद्ध–वृद्धाले मात्र चाख दिने भन्ने अवस्था अहिले रहेन । हाम्रो भजन टोलीले प्रदान गर्ने साङ्गीतिक माहोलले सबैलाई बेग्लै ऊर्जा दिने काम पनि गर्छ ।
० जे कामका लागि भनेर यज्ञ आयोजकहरूले दान सङ्कलन गर्छन् त्यही काममा रकम सदुपयोग हुन्छ कि दुरुपयोग पनि हुन्छ, के पाउनुभएको छ तपाईंले ?
– आयोजक समिति कसरी बनाउने ता कि लक्षित एजेण्डा पूरा हुन सकोस् भनेर मैले नै आयोजक समिति निर्माण गर्न आयोजकहरूलाई गाइड गरेको हुन्छु । दान रकम सङ्कलन भइसकेपछि काम भए–नभएको भन्नेमा आमसमाजमा जिज्ञासा हुन सक्छ । काठमाडौंजस्ता सहरबजारमा चाहिँ अपनत्व अनुभूति गरेर काम गर्ने व्यक्तिको अलिक कमी नै हुँदोरहेछ, त्यसले गर्दा सङ्कलित दान रकम पूर्णरूपेण सदुपयोग हुनेमा यदाकदा सन्देह रहन पनि सक्छ । तर, गाउँघरमा चाहिँ दुरुपयोग हुने सम्भावना अत्यन्त कम हुन्छ । किनकि, त्यहाँ सबैले त्यसप्रति चासो दिइरहेका हुन्छन्, काम कति भयो वा भएन भनेर हेरिरहेका हुन्छन् । यसर्थ, सहरबजारमा पनि अब अत्यन्त विचार पु¥याएर मात्र यज्ञहरू दिने सोच मैले बनाएको छु ।
० तपाईंलाई यज्ञका निम्ति निम्तो दिने त धेरै हुँदा हुन्, कसरी मिलाउनुहुन्छ कार्यतालिका ?
– हो, धेरैतिरबाट बोलावट भइरहेको हुन्छ । म पहिले त एजेण्डा हेर्छु र त्यस कार्यबाट सम्बन्धित समाजमा कत्तिको प्रभाव पर्छ भनेर लेखाजोखा गर्छु । आयोजक समितिको विश्वसनीयता मैले नियाल्ने दोस्रो पाटो हो । यस्तैगरी स्थानीय बासिन्दाको जागरण के–कति छ वा छैन भन्ने पनि मैले आफ्नै प्रकारले नियालिरहेको हुन्छु । एजेण्डाप्रति चासो र समर्थन–समर्पण छ कि छैन स्थानीयवासीको, यो अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
० ताजा जनगणनाले नेपालमा ८२ प्रतिशतको हाराहारीमा हिन्दू धर्मावलम्बी रहेको देखायो, हिन्दू बाहुल्य रहेको यस मुलुकलाई हिन्दू राष्ट्र नै घोषणा गर्नुपर्नेजस्तो लाग्दैन तपाईंलाई ?
– अवश्य । हिजो हिन्दू राष्ट्र रहँदा बरु शान्त थियो मुलुक, आज धर्मनिरपेक्षता घोषित गरिँदा उल्टै विद्वेष बढेको छ । बहुलतामा विश्वास गर्ने हो भने, जनमानसको मतको कदर गर्ने हो भने ‘सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया’ भन्ने हाम्रो हिन्दू धर्मलाई राष्ट्रिय धर्मका रूपमा घोषणा गरी विश्वमा मौलिक पहिचान बनाउनु अत्यन्त सान्दर्भिक कुरा हुनेछ । हाम्रोजस्तो उदार धर्मलाई त्यो स्थान दिइनु वाञ्छनीय हुनेछ ।
० तपाईं देश र समाजका लागि मरिमेटिरहनुभएको छ, तपाईंका कामबारे राज्य कति जानिफकार छ जस्तो लाग्छ ?
– राज्य आफैं अन्योल र अकर्मण्य बनिरहेको अवस्था छ । यस्तोमा उसले के–कति ध्यान पु¥याइरहेको होला यसै भन्न कठिन छ । फेरि मैले आफ्नो मूल्याङ्कन गर्नैपर्छ भन्ने कुरा पनि आउँदैन, समयले सबै कुरा ठीक पार्छ भन्नेमा मेरो विश्वास छ ।
० दीनबन्धु पण्डित आफ्नो पारिश्रमिक मनपरी असुल्छन्, सानातिनाले बोलाउँदा मान्दैनन् भनेर पनि भन्छन् नि ?
– यो अत्यन्त भ्रामक कुरा हो भन्न चाहन्छु । ब्राह्मणले दान–रकम आफैंले तोक्न हुँदैन भनेर आवाज उठाउने सम्भवतः नेपालमै पहिलो पण्डित हुँला म । त्यस्तो व्यक्तिले मनपरी पारिश्रमिक लियो भन्नु कतिसम्म सत्य र न्यायोचित कुरा हुन्छ, आफैँ मूल्याङ्कन गर्नुहोला । मलाई यति चाहिन्छ भनेर कतै एक शब्द पनि उच्चारण गरेको प्रमाण कसैले पु¥याउँछ भने त्यो पृथ्वी पल्टिएसरह हो । नभएको कुराको प्रमाण कसरी पुग्ला र ? कसैले स्वेच्छाले दिएको दक्षिणा मैले ग्रहण गर्ने हो । भजन टोलीको आफ्नै एउटा सामान्य पारिश्रमिक दर छ, तर मैले यति प्रतिशत या यति रकम तोकेर लिन्छु भन्ने कुरा कसले मप्रति कुन पूर्वाग्रह राखेर भन्यो, त्यो म जान्दिनँ र त्यसमा टाउको दुखाउन पनि चाहन्न ।
० तपाईंलाई यस्तो पूर्वाग्रही आरोप किन लगाइयो होला त ?
– विधर्मीहरूको प्रचार होला यो । दीनबन्धुले हिन्दुत्वको, वैदिक सनातन धर्मको प्रवद्र्धन–प्रचार गरेर हिन्दुत्वप्रति थप आस्था जगाउने भयो भनेर कसैलाई टाउको दुखेको हुन सक्छ । हाम्रो अभियानलाई तेजोबध गराउने कुत्सित मनसाय हामीबीचकै कतिपय मानिसले नै पो पाले कि ? कतिपय महानुभावले मेरो समय नपाएको कारण यसरी आक्रोश पो व्यक्त गर्नुभयो कि ? कसैलाई लाञ्छना लगाउन चाहन्न म, तर कारण यस्तै–यस्तै हुन सक्छन् । जे होस, म फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि ब्राह्मणले पारिश्रमिक तोक्नुहुँदैन, पर्सेन्टको त झन् ‘प’ पनि उच्चारण गर्नुहुँदैन । यसरी प्रतिशतमा रकम उठाएर हिँडेको भए मेरा पनि अहिलेसम्म काठमाडौंमा २–४ वटा घर हुन्थे होलान्, अहिलेसम्म डेराको बास किन हुन्थ्यो र ?
० अहिलेसम्म पनि घर–जग्गा जोड्न सक्नुभएको छैन र ?
– छैन भनुँ भने सात आनाजति जग्गा छ काठमाडौंमा, एक भक्तजनले श्रद्धाले दिनुभएको एउटा गाडी छ, यताउता पुग्न सजिलो भएको छ, तर त्यसको केही रकम बैंकमा तिर्न बाँकी भएकोले किस्ट बैंकमा किस्ता तिरिरहेको छु । कसैले दिएको दान लिनु ब्राह्मणको हकमा कुनै अपराध त होइन होला । चितवन टाँडीबाट दुई किलोमिटर उत्तरतर्फको गाउँमा एउटा एकतले सानो घर छ मेरो । त्योबाहेक मेरो सम्पत्ति केही छैन ।
० शत्रु खोज्न टाढा जान पर्दैन भन्ने बूढापाकाको उखान छ, तपाईंको हकमा यो कति लागू हुन्छ ?
– मेरो हकमा यो प्रश्न गहन छ । होला, मप्रति अज्ञानतावश कसैले विद्वेष पालेका हुन सक्छन् । हामी पुराण–शास्त्रहरूमा पढ्छौँ कि विभीषणले पोल खोल्दा रावणको हत्या पनि भयो । इतिहास–पुराणको फेरो समाएर म कसैप्रति लाञ्छना लगाउन चाहन्न, बरु कसैले यस्तो मति प्रदर्शन गरेका छन् भने तिनलाई सद्बुद्धि मिलोस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु । मेरा पिताजीको हत्याराको त पहिचान होस् तर उसलाई कुनै कारबाही नगरियोस् फगत उसलाई सद्बुद्धि फिरोस् भनी कामना गर्दै छु म । मलाई कसैले गोली हान्न आए पनि उसलाई सद्बुद्धि र सत्चिन्तन फिरोस्, नराम्रो बाटोबाट राम्रोतिर पाइला बढोस्, उसको प्रगति होस् र मभन्दा माथि जाओस् मात्र भन्न चाहन्छु । मेरो परिवारका सदस्य भनेका मेरी आमा, श्रीमती र छोरी मात्र हुन् । कसै–कसैले मेरो परिवारका सदस्य भनेर गलत फाइदा उठाउन खोजेका छन् भने त्यो समाजले नै विचार पु¥याउनुपर्ने कुरा हुन आउँछ । मैले आफ्नी आमा, श्रीमतीलाई पनि भन्ने गरेको छु कि तपाईंहरूको समृद्धिका लागि भनेर अब मैले अलग्गै समय दिन सक्दिनँ, किनकि म सामाजिक सम्पत्तिजस्तै भइसकेको छु । त्यसैले सञ्चारकर्मी मित्रहरूसँग मेरो आग्रह र अनुनय–विनय छ– मेरी आमा, श्रीमती या दाजुभाइ भनेर कोही कुनै गलत मकसद राखेर आउँछ भने विचार पु¥याएर व्यवहार गरिदिनुहोला । सकिन्छ भने दीनबन्धुले समाजका लागि यथाशक्य गरेको कामका लागि साधुवाद भनिदिनुहोला अन्यथा त्यो पनि आवश्यक छैन । तर, कपोलकल्पित र भ्रामक कुराहरूको पछि नलागिदिनु होला ।
० तपाईंको भजन–कीर्तन टोलीमा तरुनी युवतीहरू समावेश गर्नैपर्छ भन्ने कुरा पनि छापामा आए नि, यो सत्य हो ?
– यस्ता कुराले मलाई हाँसो उठाउँछ, आरोप लगाउनेप्रति दयाको हाँसो । दीनबन्धुको आधिकारिक १६–१७ जनाको टोलीमा एकजना पनि छोरीमान्छे छैन । दुनियाँमा जगजाहेर कुरा भएकाले मैले प्रस्ट्याइरहनु नपर्ला । अर्को कुरा आयोजक समितिले पनि यस्ता कुरामा हरेक कोणबाट निगरानी गरिरहेको हुन्छ । तेस्रो कुरा, हामी देख्छौँ कि धार्मिक सभा–समारोहहरूमा विशेषगरी आमा, दिदी–बहिनीहरूकै बढी सहभागिता हुन्छ । मेरा प्रवचन र हाम्रो टोलीको भजन–कीर्तनमा रमाएर आमा, दिदी–बहिनीहरू स्वतस्फुर्त रूपमा उठेर नाच्न थाल्नुभयो भने त्यो कुनै अनौठो र नराम्रो कुरा होइन । जहा“ नारीको सम्मान हुन्छ त्यहाँ देवता रमाउँछन् भन्ने शास्त्रवाणीको प्रचार गर्दै हिँड्ने मलाई यति त ज्ञान पक्कै छ कि नारीलाई कसरी सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने । हाम्रा यज्ञहरूमा महिला सहभागिता बढी भयो भन्दैमा अतिरञ्जित कुरा गरेर अर्कालाई लाञ्छित तुल्याउन खोज्नु कहाँसम्मको पाप हो, मैले भनिरहनु नपर्ला । यस्ता कुरालाई गलत रूपमा प्रचार गरिन्छ भने मेरो के लाग्छ र ? यसमा मलाई थप केही भन्नु पनि छैन । मेरा भक्तजनहरूलाई यसले दुखित तुल्याएको होला तर म विचलित हुन्नँ यस्ता कुराले । सामाजिक अभियान लिएर अघिबढेको अभियन्तालाई अनाहक लाञ्छित गर्न खोजिन्छ भने त समाजले नै प्रतिवाद गर्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ । राज्यले हामीजस्ता अभियन्तालाई सामाजिक कार्यको मूल्याङ्कन गरी प्रेरित गर्नुपर्ने हो, निरुत्साहित तुल्याउने होइन ।
२० मंसिर २०६९, बुधबार ११:५२ मा प्रकाशित